Mobile Legends Member (Myanmar) - Codashop
Mobile Legends: Bang Bang Starlight Member ကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းTop upလိုက်ပါ! သင်၏ Mobile Legends: Bang Bang user ID ဖြည့်ပါ၊ သင်ဝယ်လိုသော Starlight Member ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ MLBB အကေငာင့်တွင်း ဝယ်ယူထားသည့် Starlight Member ချက်ချင်း ဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
မိမိ စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေချေစနစ် MPT, easyPoints, Ooredoo, WavePay, Telenor.တွေနဲ့ ပေးချေလိုက်ပါ။ Credit ကတ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Login ဝင်ရခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ!
Starlight အဖွဲ့ဝင် အဆင့်သို့ အဘယ့်ကြောင့်မြှင့်တင်သင့်ပါသလဲ။
၁။ လစဉ်အခပေး အသင်းဝင်ခြင်းဖြင့် ထိုလအတွက် ကန့်သတ်ထုတ်ပေးသည့် ပမာဏကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ငွေပေးချေပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ချက်ချင်းသက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။
၂။ StarLight အဖွဲ့ဝင်များသည် ပုံမှန် အပတ်စဉ် အခမဲ့ပေးသော သူရဲကောင်းများအပြင် အခမဲ့သူရဲကောင်း အပို ၄ ဦးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးသောအချိန်တွင် ထိုသူရဲကောင်းများကို သူရဲကောင်းများ ပြသထားသော စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် အခမဲ့ပေးသော သူရဲကောင်းများသည် အသစ်လဲသလိုပင် ပြောင်းလဲနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အဆင့်လိုက်ပွဲများတွင် သူရဲကောင်း အပို ၆ ဦးကိုလည်း အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ထိုသူရဲကောင်းများကို အဆင့်လိုက် ပွဲကစားရန်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ (အဆင့်လိုက်ပွဲ ကစားရန်အတွက် အကောင့်၏ အဆင့်သည် ၆ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သူရဲကောင်း ၅ ဦး အနည်းဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားရမည် ဖြစ်သည်။)
၄။ အဖွဲ့ဝင် သက်တမ်းတိုးခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်ဝယ်ယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်တွင် အပတ်စဉ်ဆုများ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် အပတ်စဉ်ဆုများကိုမူ ၇ ရက်တစ်ကြိမ် ကစားသူ၏ အီးမေးလ်ဝင်စာပုံးသို့ ပို့ပေးနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ လတစ်လ၏ ပထမဆုံးရက်တွင် သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။
၅။ ဝယ်ယူမှုအပြီးတွင် အဖွဲ့ဝင်များသည် သီးသန့်အထူး ကိုယ်စားပြုပုံဘောင်များကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ အဖွဲ့ဝင်များသည် တိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးတိုင်း BP ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုရမည်ဖြစ်သည်။
၇။ StarLight အဖွဲ့ဝင်ခြင်းသည် ဝယ်ယူသောနေ့မှ ၃၁ ရက်အကြာထိ သက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသက်တမ်းမကုန်မီ အဖွဲ့ဝင်ကြေး ထပ်မံပေးသွင်းပါက အဖွဲ့ဝင်သက်တမ်း အလိုအလျောက် ထပ်တိုးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။"
ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုဘဲ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် Starlight အဖွဲ့ဝင် အဆင့်သို့ မြှင့်တင်ပါ
Mobile Legends: Bang Bang အတွက် Starlight Member ကို ဝယ်ယူ့ စက္ကန့်ပိုင်းသာ လိုအပ်ပါသည်။ Codashopကို အသုံံးပြုပြီး လျင်မြန်လွယ်ကူဆုံးနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Codashop ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ ဂိမ်းကစားသူတွေဆီကနေ ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Codashop ကနေ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ခရက်ဒစ်ကဒ် အသုံးပြုစရာမလို၊ Login ဝင်စရာမလိုတာကြောင့် အဆင်ပြေစေပါတယ်။. စတင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ